Arbaco 2008-03-19 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Abdulqadir cukaash Cali
Publicerat onsdag 19 mars 2008 kl 15.49
Barnaamijka maanta wax yaabaha aad ku maqli doontaan::
Nimankii somalida haa ee haytey dhalashada Iswiidhishka ee lagu xirey magaalada Stockholm, ayaa mid kamida loo dheereyay xabiskii. Taa soo uu codsanay qareenku. Ninkaan ayaa lasii hayn doonaa ilaa iyo 27 bishaan, waqtigaas oo lagu wado in maxkamed lasoo taagi doono.
Xawilida lacagaha oo muran dheer ka taagnaa iyaa iyo intii ka dan beeysan 2001, ayeey soomali badani ku adkeeysatey ineey sii wadaan waxaana kamida somalidaas A/qadir Cukaash Cali, oo asga horey loo xirey lana soo daayey.
Kulan sihabsamiya loo sooagaasimey ayna iskugu yimaadeen dadyoow aad u kala duwen, ayaa ka qabsoomay xaafada Rinkeby oo ku taala magaalo madaxda da’lkan Iswiidhan. Kulankaas oo looga dooda hayey habka cadaaladu meesha yamareeyso iyo dhibaatada lagu hayo somalida iyo Islaamka.
Dugsigii Xanaanadda Caruurta ee Bismilah, ooy walwal ka muujiyeen waalidiintii caruurtoodu dhiganeeysay iyo shaqaalihii xanaanooyinkaas midka mida. Kadib markii albaabada loo xirey amar ka jimid maamulka sare ee magaalada Stockholm oo dib ugal noqotey ogolaashihii iyo kaalmadii dhaqaale ee lasiinjirey xanaanooyinkaas
Maxaadka taqaan, dhaqanka NAYRUUSKA? dayoow badan oo caalamka jooga ayaa u dabaal daga haya maalintaas oo baru subax nimada ku beegan. Hadii aad u dabaal dagtid waxeey laantu kugu leedahay hanbalyo iyo nayruus wanaagsan.